Umaki: i-imeyili yokumaketha i-roi | Martech Zone
Umaki: i-imeyili yokumaketha i-roi
Lwesine, Disemba 6, 2012 Lwesibili, Disemba 4, 2012 Douglas Karr
Ngisanda kuthumela uhlu lwami lokuhlola online futhi elinye lamasu abaluleke kakhulu ukumaketha nge-imeyili. Ukumaketha nge-imeyili kusenenzuzo ephezulu kakhulu ekutshalweni kwemali, izindleko eziphansi zokungena, futhi ingenye yezobuchwepheshe obucindezelayo obushiyelwe abathengisi ukuthi bafinyelele kubabhalisile babo bamanje. Ukuthengisa nge-imeyili kuyasebenza - sonke siyakwazi lokho kodwa ngabe incwadi yakho yezindaba ye-imeyili ibaluleke kangakanani enhlanganweni yakho? Ngabe uyaqonda ukuthi yini
Ngihlangabezane nevidiyo kaTony Robbins kwa-TED ebikhuthaza kakhulu. Omunye wemigqa yakhe uzwakale eyiqiniso kimi uqobo: Izinsizakusebenza ngokuqhathaniswa Nokusetshenziswa Komunye wemisebenzi enelisa kakhulu engake ngaba nayo ukuba yi-Integration Consultant ye-ExactTarget. Ngaleso sikhathi, i-ExactTarget yayine-interface application limited limited (API) kepha amaklayenti ethu ayekhula ngobuciko nokuzenzekelayo. Nsuku zonke kwakungumhlangano nekhasimende eline-